Tayada, Naqshadeynta Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Kaameradda Gawaarida, Qalabka LED-ka ee Lagu Sameeyay Shiinaha, Soosaarayaasha - Dongguan Yingjia Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd
Mini WIFI qalabka wax lagu duubo ee la qaadi karo
2 inch kamarad yar oo WIFI 4G ah
4 inch mini 3 camera baabuur kala qeybsan
2.5D 4 inch kamarad DVR
Yingjia Elektarooniggu waa xirfadle waayo waa halis. Sababtoo ah waa xirfadle, waa u qalantaa xulashadaada!
7 inch HD rikoor wadista kamarad laba geesood ah
U oggolow inaad haysato taariikh-bixiye sare oo qeexaya wadidda aragtida habeenkii oo laga sameeyay aaladda zinc. 7-inch taabashada shaashadda sare ee kamaradda baabuurta 7-inch rikoor xamuul ah, DVR baabuur hore iyo gadaal laba kamaradood ah, duubista baabuurta ee aragga habeenkii ah, kamarad baabuur qeexitaan sare oo lagama maarmaan u ah dib u noqoshada, fududahay rakibidda iyo fududaanta isticmaalka, 7- dherer dherer dhererkiisu sarreeyo oo inch ah, wax walba waxaa loogu talagalay oo keliya nabadgelyadaada aawadeed.
10 inch HD aragti fiidiyow qulqulka maqalka warbaahinta
Aaminaada YJ kalsoonida sare leh ee duubista aragtida habeenka, ayaa ku wehelinaysa adiga oo wata sawirro qeexan oo 2K iyo shaqooyin hodan ah Rikoodha wadista aragtida habeenkii, haddii aad duubto sawirro qeexitaan sare leh habeenkii ama maalintii, wax walbaa keliya ayaa loogu talagalay nabadgelyada wadistaada.
12 inch HD kamarada warfaafinta gawaarida gawaarida
Soo bandhigida badeecada faa iidada dhibic: Tayada sare ee 12-inch ah ee taabashada gaariga DVR HD aragtida habeenka muraayadaha wadista muraayadaha duubista kamarada duubista fiidiyaha fiidiyaha fiidiyaha aragtida fiidiyoowga ciyaariyaha warbaahinta. Wax walba waxaa kaliya loogu talagalay nabadgelyadaada.
8 inch desktop 4G qulqulka kamarada warbaahinta
Faa'iidada barta iibinta badeecada: Kaamirada baabuurta HD ee lagu rakibi karo dashboardka, Android 8 inch 4G baabuur DVR kamarad GPS hagitaan ADAS FHD 1080P HD baabuur duubista fiidiyaha aragtida aragtida WiFi habeynta fog HD rikoor wadista aragtida habeenkii
4 inch 2.5D kamarad koob yar oo nuugid ah
Kamerad yar oo fudud oo heer sare ah, 4-inch HD 1080P laba-lens baabuur DVR, 2.5D mini camera nuugista koob ballaaran-xagal 170 digrii, duubista qeexitaanka sare, qaab muuqaal qurxoon, hawl fudud. badbaadada.
12 inch 1080P HD 4G duubista warbaahinta
10 inch shaashad taabasho buuxda 4G wifi ADAS gadaal muuqaalka gaariga muraayadda 1080P DVR. Android GPS Navigator laba HD kamarad hore oo gadaal ah. (Ikhtiyaar) 12 inch shaashad taabasho buuxda 4G wifi ADAS gadaal muraayada gaariga muraayadda 1080P DVR camera. Navator GPS-ka Android-ka ah kamaradaha gadaal hore-qeexitaanka sare. Nooca 4G WIFI wuxuu leeyahay 10-inch-high-definition-night high-definition night night streaming streaming recorder iyo 12-inch gaari 1080P camera ah, oo lagu rakibi karo muraayadda muraayadda hore ee gaariga asalka ah, iyo sidoo kale diiwaanno wadista qeexitaan sare oo awood u leh lagu rakibo dashboardka qalabka aad dooratay. Wax walba waxaa kaliya loogu talagalay nabadgelyadaada.